kuzvidzora munoenzanisa dhaka tenzi batch mangé - Shanghai Honest Chem. Co., Ltd
Product Description Self-munoenzanisa Compounds mukudzidzire batch mangé Zvinonzi ainyanya kushandiswa kuzvipira nokuputsa yeimwe, akaoma-yakavhenganiswa powdery zvinhu imwe mhando zvinosanganisira redispersible polymer upfu, cellulose ethers uye vamwe surfactant uye vavaki. The chigadzirwa akanga zvakakwana kwakaedzwa kuedza pamisika, akawana mukurumbira wakanaka nokuda vanoshandisa. Kazhinji, redu rimwe bhegi (25kg) kuzvidzora munoenzanisa Compounds mukudzidzire batch mangé anogona kubereka pamusoro ...
Supply Mano: 10000 tani / Year
Self-munoenzanisa Compounds mukudzidzire batch mangé
Zvinonzi ainyanya kushandiswa kuzvipira nokuputsa yeimwe, akaoma-yakavhenganiswa powdery zvinhu imwe mhando zvinosanganisira redispersible polymer upfu, cellulose ethers uye vamwe surfactant uye vavaki. The chigadzirwa akanga zvakakwana kwakaedzwa kuedza pamisika, akawana mukurumbira wakanaka nokuda vanoshandisa.
Kazhinji, redu rimwe bhegi (25kg) kuzvidzora munoenzanisa Compounds tenzi batch mangé anogona kubereka mumwe savi kuzvidzora munoenzanisa dhaka.
Zviri nyore kuti nokushanda uye formular riri zvesayenzi chaizvo.
Kavha uye Storage
A. Standard Apex In 25kg paper back chomukati pe mabhegi
B. Big Bag kana zvimwe chaiwo Mabhokisi zvinogoneka pamusoro chikumbiro.
Chengetera mune yakaoma ezvinhu, uye okuchengetera zvinhu nguva haafaniri kupfuudza rimwe gore.
The apa musi maererano nokuziva kwedu, asi regai pamutoro vatengi kunyatsoongorora vachiongorora zvose pakarepo pamusoro chionekeso. Kuti vadzivise siyana Pfungwa uye zvakasiyana pakugadzira zvinhu, ndapota itai zvakawanda yokuedzwa asati kurishandisa. We kuchengetera kodzero kuchinja chigadzirwa yedu uye pasina paakaudza pachine.
Previous: Industrial giredha HPMC
Next: Pharma giredha HPMC
Tenzi Batch China nokutengesa
Duri Tenzi Batch
Self-Nhambo Compounds Master Batch
Self-Nhambo Compoun DS Master Batch Factroy
Self-Nhambo Compounds Master Batch Manufacturer
anomiririra kuzvipupurira Nhambo Compounds Master Batch Price
Self-Nhambo Duri Master Batch
Self-Nhambo Duri Master Batch Factory
Self-Achidzivirira Duri Master Batch Manufacturer
Pharma mugwaro Ethyl Cellulose (EC)
Industry mugwaro Ethyl Cellulose (EC)